Singular စျေး - အွန်လိုင်း SIGU ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Singular (SIGU)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Singular (SIGU) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Singular ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
SIGU – Singular
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Singular တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Singular များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SingularSIGU သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0165SingularSIGU သို့ ယူရိုEUR€0.0139SingularSIGU သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0126SingularSIGU သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0151SingularSIGU သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.148SingularSIGU သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.104SingularSIGU သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.367SingularSIGU သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0615SingularSIGU သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.022SingularSIGU သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0229SingularSIGU သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.371SingularSIGU သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.128SingularSIGU သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0882SingularSIGU သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.24SingularSIGU သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.79SingularSIGU သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0226SingularSIGU သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0247SingularSIGU သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.514SingularSIGU သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.115SingularSIGU သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.75SingularSIGU သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩19.59SingularSIGU သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦6.27SingularSIGU သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.21SingularSIGU သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.458
SingularSIGU သို့ BitcoinBTC0.000001 SingularSIGU သို့ EthereumETH0.00004 SingularSIGU သို့ LitecoinLTC0.000279 SingularSIGU သို့ DigitalCashDASH0.000165 SingularSIGU သို့ MoneroXMR0.000175 SingularSIGU သို့ NxtNXT1.2 SingularSIGU သို့ Ethereum ClassicETC0.00232 SingularSIGU သို့ DogecoinDOGE4.61 SingularSIGU သို့ ZCashZEC0.000173 SingularSIGU သို့ BitsharesBTS0.636 SingularSIGU သို့ DigiByteDGB0.601 SingularSIGU သို့ RippleXRP0.0544 SingularSIGU သို့ BitcoinDarkBTCD0.000557 SingularSIGU သို့ PeerCoinPPC0.0578 SingularSIGU သို့ CraigsCoinCRAIG7.37 SingularSIGU သို့ BitstakeXBS0.69 SingularSIGU သို့ PayCoinXPY0.282 SingularSIGU သို့ ProsperCoinPRC2.03 SingularSIGU သို့ YbCoinYBC0.000009 SingularSIGU သို့ DarkKushDANK5.19 SingularSIGU သို့ GiveCoinGIVE35 SingularSIGU သို့ KoboCoinKOBO3.63 SingularSIGU သို့ DarkTokenDT0.0152 SingularSIGU သို့ CETUS CoinCETI46.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 00:40:02 +0000.